फेरी लकडाउन–२ कीसीमको हुने ! कहिले देखि हुन्छ लकडाउन ? – sudursanchar2
Breaking News अन्य
नेपालमा अहिले जे सोचिरहेका छन्, त्यस्तै सोच्दा इटालीमा भयावह स्थिति आएको नबिर्सौँ ।आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाले पनि केही सङ्केत गर्छ । सरकारले अहिले नागरिकलाई सचेत मात्र गराएको हो । खे’लाँची गरियो भने फेरि लकडाउन-२ भो’ग्न पर्ने हुनसक्छ । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****